काठमाडौँ ।पछिल्लो समय हास्य टेलिश्रृखला ‘सक्किगोनी ‘ नेपालको निकै चर्चित कमेडी सिरियल हो । त्यसै हास्य टेलिश्रृखलाकी एक पात्र हुन् रक्षा श्रेष्ठ। उक्त सक्किगोनी टेलिसिरियलमा उनी एक चर्चित पात्र कुमार कट्टेल (जिग्री)को गलफ्रेण्ड बनेकी छिन् । सक्किगोनी हेर्ने र रक्षालाई चिन्ने धेरै नेपालीहरूलाई रक्षा विवाहित हुन् भन्ने कुरा थाहा नभएको हुन् सक्छ । उनलाई रिल र रियलमा पनि जिग्रीकै गलफ्रेण्ड हुन भन्ने भ्रम धेरैमा मनमा छ । तर रक्षा एक विवाहित महिला हुन् । वास्तविक नाम बाटै उक्त हास्य सिरियलमा आफ्नो अभिनय दिँदै आएकी रक्षाले भद्रगोल मा राम्रो सफलता पाएकी…
अनमोल र सुहानको जोडी “ए मेरो हजुर ४” मा बन्ने पक्का
काठमाडौँ –नेपालि फिल्म ए मेरो हजुर ४ मा चर्चित नायक अनमोल केसीले अभिनय गर्ने पक्का भएको छ ! चर्चित लभस्टोरी सिरिज ए मेरो हजुर को चार औ श्रृंखलामा अनमोल केसी र सुहाना थापाको जोडी बाधिने भएको छ ! ए मेरो हजुर ४ लाई पनि ए मेरो हजुर ३ निर्देशन गरेकी अभिनेत्री झरना थापा ले गर्ने भएकी छिन ! ‘ए मेरो हजुर ३’मा झरनाले छोरी सुहाना थापालाई यही फिल्मबाट ब्रेक दिएकी थिइन्। त्यतिबेला अनमोल–सुहाना जोडी बनेर पर्दामा छाएका थिए। फिल्म व्यापारिक रुपमा सफल भएपछि अब यसको चौथो श्रृंखला बन्न लागेको हो।आज…
सास्त्रकानुसार भाकल भनेको के हो ..? के को लागि गर्नु पर्छ भाकल ..? हामीले सुन्ने गर्दछौ देबी भगवान हरुलाई भाकल गरेको छु भनेर भाकल भनेको हामीले भगवान संग गरिने भाका हो ! अर्थात भगवान लाई बाचा गर्नु हो ! भगवान संग केहि कुरा मागेपछि भगवान लाइ दिने भाका हो ! भाकल भनेको भाकल नै हो ! भाकल गर्ने व्यक्तिले कुनै ब्यापार व्यवसाय गर्दा राम्रो होस् केहि पाउ , बिरामी हुदा निको होस् भनेर आफ्नो इच्च्याले त्यो माग पुरा भए मा यो दिन्छु भन्नु हो ! आफ्नो ईच्छा अनी आफुले छनौट…
चर्चित सुन्दरी नायिका केकी अधिकारिका सुन्दर तस्बिरहरु हेर्नुहोस !
काठमान्डौ : चर्चित नायिका केकी अधिकारिका हेर्नुहोस तस्बिरहरु : नायिका केकी अधिकारि सन् २०१० बाट फिल्म स्वर बाट डेब्यु गरेकी थिइन ! उनले अहिले सम्म धेरै स्मरणीय फिल्म हरुमा अभिनय गरिसकि छिन ! सन् २०१० मा फिल्म ‘स्वर’ बाट डेब्यू गरेकी उनले थुप्रै स्मरणीय फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन्। अघिल्लो साल ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ बनाएर निर्माणमा प्रवेश गरेकी उनले यो वर्ष फिल्मसँगै ‘कमेडी च्याम्पियन’ शीर्षकको कमेडी टेलिभिजन कार्यक्रम पनि ल्याएकी छिन्।सकारात्मक सोचलाई आफ्नो सुन्दरता र तन्दुरुस्तीको कारण मान्ने केकीले ‘सम्पूर्ण’लाई ( ‘जुम्बा र योग आलोपालो गर्छु’) आफ्नो फिटनेस रहस्य बताएकी छिन्। छरितो…
फाइल फोटो/ रुपन्देही । नेपाली सेनाले नागरिकसँगको अन्तरक्रियालाई अघि बढाएको छ। सेना–जनता बिचको दुरी टाढा भएको चर्चा चलेकै बेला सेना नागरिकसँगको छलफलमा जुटेको हो। नागरिक र सैनिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने भन्दै ११ जिल्लामा अन्तरक्रिया गरिसकेको सेनाको श्रव्य दृश्य महाशाखा टोली शुक्रवार बुटवल आएको हो। प्रधानसेनापतिको निर्देशनमा ‘नागरिक सैनिक अन्तर्क्रियाको अवधारणा महाशाखाले अघि सारेको छ। सेनाको गरुड दल गण बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सेनाका आचारण, सीमा विवाद, सेना र नागरिक तथा सञ्चारमाध्यम बीचको सम्बन्धलगायतका विषय उठेका थिए। सीमा अन्तर्क्रियामा नेपाली सेनाका श्रब्यदृष्य महाशाखाका प्रमुख तथा महासेनानी ईश्वरकुमार श्रेष्ठले राज्यले जहाँ खटाए पनि…
पूर्वयुवराज पारस सोनिकालाई पिङ खेलाउँदै ! हेर्नुहोस भिडियो सहित
पुर्बयुवाराज पारस शाह र सोनीका रोकाए नाम कि युवती लिंगेपिंग खेलिरहेको अर्थात पारस ले सोनीका ले लिंगेपिंग खेलाइरहेको भिडियो युतुब मा आएको छ र सामाजिक संजाल हरुमा निकै भाइरल बनिरहेको छ ! साएद यो भिडियो पोखरामा तिहारको समयमा खिचेको हुनुपर्दछ ! तर अहिले युटुब फेसबुक तुइटर जस्ता सामाजिक संजाल हरुमा निकै नै भाइरल बनिरहेको छ ! सोनीका रोकाएले नै पुर्बयुवाराज पारस संग पोखरा देखि मुक्तिनाथ सम्म विभिन्न समय समयमा घुमघाम गरेको भिडियो हरु आपनै च्यानल द सोनीका सो बाट युटुब मा हालेकी हुन् ! भिडियोले उनीहरुबीच झांगिएको अन्तरंग मित्रताको वयान…